Cawbird, iyo yakavhurika sosi yeGTK mutengi ye Twitter inosvika kune yayo vhezheni 1.3.1 | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura Cawbird 1.3.1 Yakagadzirisa Shanduro Kuburitswa Kwakaburitswa , que inogadzirisa zvimwe zvinokanganisa maitiroMukuwedzera pakusanganisa kumwe kugadziridzwa uye gadziriso yekutapa midhiya uye nhare mbozha.
Kune avo vasingazivane neCawbird, iwe unofanirwa kuziva izvo ino yazvino uye isingaremi Twitter mutengi weiyo GNOME 3 desktop. Iyo inoratidzira online vhidhiyo uye mufananidzo wekutarisa, rondedzero uye chaunofarira chisikwa, tweet kusefa, uye yakazara-zvinyorwa kutsvaga. Cawbird inogona kubata akawanda Twitter maakaunzi.
Cawbird forogo yeCorebird, iyo yakave isingatsigirwe mushure me Twitter yaremadza iyo API yekushambadzira. Cawbird inoshanda nemaAPIs matsva uye inosanganisira zvimwe zvinogadziriswa uye zvigadziriso izvo zvakambo nongedzerwa muIBBoard yetsika Corebird kuvaka pane yako wega Open Vaka Sevhisi account.
Kunyangwe ichifanira kutariswa izvo Nekuda kwekuchinja kune iyo Twitter API, Cawbird ine zvinotevera zvinotevera.
Cawbird ichagadzirisa yega maminetsi maviri
Cawbird haina kuziviswa nezveinotevera, iyo ichagadziriswa pane reboot:
Nyarara / Regedza
Dzimwe shanduko kurondedzero
1 Chii chitsva muCawbird 1.3.1?
2 Maitiro ekuisa Cawbird pane Linux?
Chii chitsva muCawbird 1.3.1?
Ye yekuvandudza yakaunzwa mune iyi nyowani yekugadzirisa vhezheni yeCawbird 1.3.1 tinogona kuwana izvo kunatsiridzwa kugona kuviga ma tweets ese mumaonero ekuona kana uchivhara kana kudzora mushandisi.
Kuwedzera pakuve yakamisikidzwa kuvhura uye kurira activation kana uchibvisa yemuno cache yevashandisi vakavharidzirwa kana vadzora uye kurodha mabhuroko ezvinyorwa zvakagadzirwawo vasati vatora nguva kana kutaurwa kuti vaone kuti maTweets akavharirwa kana akadzikiswa akavanzwa pakutanga.
Uyewo zvigadziriso zvakagadzirwa pakubatanidza ma tweets uye marongero ezaziso kubvumira diki yekumisikidza dialog yemafoni nhare.
Yeimwe shanduko izvo zvinoratidzika mushanduro nyowani:
Zadza zvishoma nezvishoma mabhegi ema tweets emaprofiles kuitira kuti Deactivate RTs ivanze maTweets akawandisa kuitira kuti iwo maonero asatsvage
Meseji yetipipu inopihwa ichitsanangura kuti nei mutoro wenhau wakundikana (semuenzaniso, Twitter haitsigire vhidhiyo codec).
Kiinura / kiinura ruzha ikozvino rwunoti "kiinura" kana "vhura ruzha" pane bhatani pane kugara uchiti "kiinura"
Gadzirisa midhiya saizi macheki kuitira kuti mavhidhiyo arege kutadza nekuti akakura kupfuura iwo muganho wemufananidzo
Narrower mushandisi account rondedzero yakatetepa windows kudzivirira kufashukira uye kudonhedzwa 'mbiri' bhatani
Pakupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo nezve iyi nyowani vhezheni yeCawbird, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa Cawbird pane Linux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa uyu mutengi weTwitter pane yavo system, vanogona kuzviita nekutevera rairo dzatinogovana pazasi.
Izvo zvakakosha kutaura izvozvo Cawbird inowanikwa mukati mezvakachengetedzwa zvekuparadzirwa kukuru Linux, pamwe zvakare ine enharaunda mapakeji pane Flatpak uye Snap, izvo zvinoita kuti kuiswa kuve nyore.
Semuenzaniso, kune avo vanofarira kuisa iyo Flaptak package, ivo vanongofanirwa kuita unotevera kuraira:
Kana vari avo vanosarudza kushandisa Snap, vanogona kuisa Cawbird kubva kune chinongedzo nekunyora zvinotevera:
Iye zvino nezvemapakeji ezvakasiyana zvekuparadzirwa kweLinux, tinogona kuita kuisirwa muUbuntu uye chero chinobva pazviri nekutaipa zvinotevera mune chinouraya:
Kana vari avo vashandisi veFedora uye zvigadzirwa:
Panguva yeavo vashandisi veArch Linux, Manjaro kana chero chimwe chinobva paArch Linux:
Pakupedzisira kune avo vanovhura vashandisi:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Cawbird, iyo yakavhurika sosi yeGTK mutengi ye Twitter inosvika kune yayo vhezheni 1.3.1
Usazvinetse zvakanyanya nevatengi ve Twitter izvo vanhu vatanga kutamira kuParler, Gab, nezvimwe.
Chingave chakanaka nemaapplication aya ndechekuti ivo vanobvumidza ese mapuratifomu kutarisirwa panguva imwe chete
Zvinoshamisa zvinhu zvakaitwa nechirongwa cheBlender